Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Delta Air Lines zụrụ ụgbọ elu 30 ọzọ nke Airbus A321neo
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • investments • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Ịgbakwụnye ụgbọ elu Airbus A321neo na -ewusi mkpebi Delta Air Lines ike iji ụgbọ elu na -adigide na -arụ ọrụ nke ọma dochie ụgbọ mmiri ochie.
Delta Air Lines nyere iwu 30 ụgbọ elu Airbus A321neo ọzọ.
Iwu ọhụrụ na -ewetara Airbus iwu pụrụ iche site na Delta ruo ngụkọta nke 155 A321neos.
Delta na -egosi onye ndu nwere ezi ọrụ na ịtụ votu ntụkwasị obi siri ike ugbu a na A321neo.
Delta Air Lines enyela iwu 30 ụgbọ elu Airbus A321neo iji nyere aka gboo mkpa ụgbọ elu ahụ n'ọdịnihu. Ụgbọ elu ọhụrụ ahụ enyere bụ mgbakwunye na iwu ụgbọ elu dị ugbu a maka ụdị 125, na-ebute iwu pụtara ìhè site na Delta na ngụkọta nke 155 A321neos.
Mahendra Nair kwuru, "Ịgbakwụnye ụgbọ elu ndị a na -ewusi nkwa Delta ike iji ụgbọ elu na -adigide, na -arụ ọrụ nke ọma, na -enye ahụmịhe ndị ahịa kacha mma na ụlọ ọrụ." Delta Air Lines'Onye osote onye isi oche - Chain Supply Fleet na TechOps. "Delta nwere ekele maka mmekorita dị ukwuu na ndị otu Airbus na -akwado atụmatụ uto anyị, anyị na -atụkwa anya ịnọgide na -arụkọ ọrụ ọnụ n'oge mgbake ahụ na gafere."
Christian Scherer, onye isi azụmaahịa na onye isi nke Airbus International kwuru, "Ka ụlọ ọrụ ahụ na -ele anya ịpụta na ọrịa ọjọọ, Delta na -egosi onye ndu nwere ọrụ ma na -atụ vootu ntụkwasị obi siri ike ugbu a na A321neo." "Site n'iwu maka ụgbọ elu 30 ọzọ nke na -achọsi ike n'ụwa niile, ndị mmekọ anyị na Delta na -emesi ike ọrụ dị mkpa ha na -ahụ maka A321neo na arụmọrụ gburugburu ebe obibi ya dị ịrịba ama maka ọrụ ndị ahịa ama ama na ntụkwasị obi nke ụgbọ elu ahụ ruo ọtụtụ afọ. ọdịnihu. ”
Delta A321 Neos ga-eji ike turbofan Pratt & Whitney PW1100G ọgbọ na-abịa nke na-eweta uru dị ukwuu karịa ụgbọ elu A321 ugbu a, nke na-arụ ọrụ nke ọma. Akwadoro oche zuru oke maka ndị ahịa 194 nwere 20 na klaasị mbụ, 42 na Delta Comfort+ na 132 na Main Cabin, Delta A321neos ga -ebu ụzọ gafee nnukwu ụlọ ọrụ ụgbọ elu, na -akwado ụgbọ mmiri Delta ugbu A321 nke ihe karịrị ụgbọ elu 120. A na -atụ anya na ụgbọ elu ahụ ga -enweta nke mbụ n'ime ụgbọ elu ya 155 A321neo n'isi mbido afọ na -abịa.
A ga -ewepụta ọtụtụ Delta A321neos site na Airbus US Manufacturing Facility na Mobile, Alabama. Ụgbọ elu ahụ ebubatala ụgbọelu 87 nke Airbus rụpụtara na United States kemgbe 2016.
Ka ọ na -erule ngwụsị Julaị, ụgbọ elu Delta nke ụgbọ elu Airbus dị 358, gụnyere ụgbọ elu 50 A220, ndị otu 240 A320, ezinụlọ 53 A330, na ụgbọ elu 15 A350 XWB.